Qurba joog 2 sano dadaal lataaban karo kusameesan
Tuesday November 10, 2015 - 01:37:22 in Wararka by Web Admin
Gabadha lagu magacaabo Joana Miro waxay Sweden qaxooti ku soo gashay labo sano ka hor, iyadoo muddo gaaban ku baratay luuqada isla markaana ku bilowday jaamacada Uppsala oo ka mid ah jaamacadaha ugu afka dheer Sweden
Joana oo ka soo jeeda wadanka Syria ayaa ka soo carartay dagaalada wadankaasi ka socda. Markii ay Sweden timid ayay ku hami weyneyd in ay bilowday waxbarashada farmashiyaha iyadoo dadaal dheer u gashay in ay luuqada barato. Waxay telefishinka SVT u sheegtay in ay dadka kula sheekaysato baska iyo meelkasta oo ay kula kulanto. Waxay muddo gaaban ku dhamaysay SFI, SAS iyo Svenska 1, 2,3.
Intaas kuma aysan hakan ee waxay codsi u dirtsatay jaamacada Uppsala Universitet oo ay sanadkaan bilowday waxbarashada farshamiyaha. Waxay sheegtay in aabaheed uu dhaqtarka ilkaha isagoo ku riyoonayay in caruurtiisa ay mustaqbal waxbarasho samaystaan. Aabaheed ayay sheegtay in 16 sano ka hor uu dhintay, sidaas darteedna ay doonayso in ay ka dhabayso riyadiisii. Hooyadeed oo hada kula nool magaalada Västerås ayay sheegtay in ay habeen iyo maalin garab taagan tahay.
Guusha ay gaadhay gabadhaan qaxootiga ku soo gashay Sweden labo sano ka hor ayaa muujinaysa in ay macquul tahay in hore loo socdo qofkii doonaya. Qofka hamiga leh ayaa gaaraya hamigiisa haddii uu dadaal dheeri ah la yimaado.